Akụkọ - Bezzia | Bezzia
Actualidad bụ ngalaba lekwasịrị anya na awa ikpeazụ nke ndi amara, mmemme na nnọkọ oriri na ọ partiesụ ,ụ, yana ezumike na omenaala. Ọ ga-agụnye akụkọ niile metụtara ndị ama ama na ndụ ọha na nke onwe ha: ọmụmụ, agbamakwụkwọ, nkewa, mkparịta ụka, nnọkọ onwe, onyinye galas, akụkọ banyere njegharị, ihe nkiri, ihe ngosi akwụkwọ ma ọ bụ ihe omume dị iche iche.
Na mgbakwunye na ịbụ ihe ọhụrụ na ụwa pink, anyị chọkwara ịkọ isiokwu niile metụtara ya. oge ezumike na omenala, ka anyị wee nwee ike inye ndepụta zuru ezu nke ọdịbendị na ntụrụndụ maka ụmụ nwanyị.
N'ebe a, ị nwere ike ịchọta oge ikpeazụ nke ndụ nke ụdị, ndị na-abụ abụ na ndị na-agba ụkwụ, yana ọhụụ egwuregwu kachasị ọhụrụ ma ọ bụ ntọhapụ nke ọba egwu David Bisbal. Na mgbakwunye, anyị chọrọ igosipụta ihe ndị dị ugbu a site n'echiche kachasị ọhụrụ, na-ejide ọnọdụ ndị dị n'ụwa nke telivishọn, ndị ama ama ma ọ bụ akwụkwọ.
por Maria onyekwere eme Ụbọchị 3 .
N'ọnwa a, anyị na -agagharị akwụkwọ akụkọ anọ ndị a na -aga n'oge ọzọ. Anyị na -eme ya site n'aka ndị edemede nke ...
por Susana godoy eme Ụbọchị 5 .
Netflix na -aga n'ihu na -eju anya mgbe ụfọdụ. N'ihi na ọ bụ eziokwu na oge ọ bụla ọ na -ewepụta usoro amụma site ...
Ihe ndekọ ị nwere ike gee ntị na Ọktọba a
por Maria onyekwere eme 1 izu .
N'ọnwa a ị nwere ohere ịnụ na nke mbụ ọba ọhụrụ nke ezigbo aka nka. Na Bezzia ...
Egwuregwu Squid: Onye ọ bụla na -ekwu maka ya!
Ọ bụ eziokwu na Netflix nwere ike iju anyị anya na usoro ọhụrụ ma ọ bụ ihe nkiri. Ọtụtụ n'ime ha abanyelarị na retina anyị ...
Usoro nke Netflix anaghị enye ohere ọhụụ: kagbuo!
por Susana godoy eme 3 izu .
Netflix bụ otu n'ime nyiwe nwere ọdịnaya kachasị. N'ihi na ọ na -agbanwe mgbe niile na ọtụtụ mmalite, ma site na ...
Mmetụta gburugburu ebe obibi na akụ na ụba nke ugwu mgbawa
por Maria onyekwere eme 3 izu .
Anyị anọwo na -ahụ mgbawa nke ugwu mgbawa Cumbre Vieja ruo otu izu. Ma ka ndị ọkachamara na -arụ ọrụ iji kpochapụ ...
Ihe nkiri Spanish nke a ga -ewepụta n'ọnwa Ọktoba na -abịa
A ga -enwe ọtụtụ ihe nkiri Spanish a ga -ewepụta n'ọnwa Ọktoba na sinima anyị. Ọtụtụ n'ime ha bụ ...
Malitere ọnwa Ọktoba ị nwere ike ịhụ na Netflix
por Susana godoy eme 4 izu .
Ikekwe n'ihi na ọ bụ otu n'ime ikpo okwu na -apụtakarị ekele maka ọnụọgụ mbụ ọ nwere ...
Nke a bụ ka ewepụtara mbipụta 69th nke Ememme San Sebastian
por Maria onyekwere eme 1 ọnwa .
Echi, mmemme San Sebastian nke 69 ga -emepe. Ruo Septemba 25, otu ...
por Susana godoy eme 1 ọnwa .
Enwere ọtụtụ usoro na -egosi na nyiwe. Mpụta izizi anaghị akwụsị ime na ugbu a, yana ...
Mgbụsị akwụkwọ bụ oge na -akpọ gị oku ka ị gụọ. Mgbe ndụ mmekọrịta ọha na eze na -agwụ ike na ike ọgwụgwụ ...